Makiyi mashanu ekudzivirira mari yako yekudyara | Ehupfumi Zvemari
Mari yekudyara ndeimwe yedzimwe nzira dzakasarudzika dzevatengesi veSpanish kuti kuchengetedza kwavo kubatsire. Kusvika padanho rekuti mumwe muvatatu akanyorera chigadzirwa chemari chehunhu uhu, maererano neazvino dhata yakapihwa neInverco. Iyo yemhando yekuchengetedza iyo yakaratidza avhareji kuongororwa mukati megore rapfuura kutenderera 2,50%. Nezvakanakira izvo zvavanoratidzwa pasi pemafomati akasiyana: equities, mari yakatarwa, yakavhenganiswa kana kunyangwe kubva pane dzimwe nzira. Kuzvigadzirisa pachayo sechigadzirwa chikuru chekuchengetedza panguva ino.
Kukosha kwaro mune mari yekudyara kweavo vadiki nevepakati varimimari zvinonyanya kukonzerwa nekushomeka kwezvirongwa zvine pundutso zvekuvandudza kukwana. Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganwika kuti zvigadzirwa zvebhanga zvechivanhu hazvipfuure nenguva dzakanakisa. Asi zvinopesana, ivo vanonyudzwa mune mashoma kudzoka semhedzisiro yeiyo mutengo wakachipa wemari. Uye izvo zvakatungamira kune nguva yekuisa mari, zvinyorwa zvevimbiso kana kunyangwe akakwira-goho maakaunzi asiri kupa mubereko pamusoro pe1,50% panguva ino chaiyo.
Chero zvazviri, mari yekudyara yave imwe sarudzo kune izvi zvigadzirwa zvemari, kunyangwe zvisiri panjodzi. Chaizvoizvo kuitira kuti izvi zvinyanye, hauzove nesarudzo kunze kwekushandisa akateedzana emazano kuitira kuti vakupe chengetedzo huru mune yega yega kushanda. Zvichienderana nekuumbwa kwemari idzi uye nenyaya yekuti mamwe akaomarara kupfuura mamwe. Naizvozvo ivo vachada a kuchengetedzwa kwakawanda nemabasa ako. Idzi ndidzo dzichava dzimwe dzenzira dzekuzvidzivirira dzauchazove nadzo pamusoro peichi chinozivikanwa chemari chigadzirwa.
1 Mari yakachengetedzwa mari
2 Kushanda manejimendi yemari
3 Models ine kusiana kukuru
4 Vhura kune zvitsva zvataurwa
5 Iyo yakachengeteka: mari
6 Fukidza kusagadzikana kwezviitiko
Mari yakachengetedzwa mari
Ehe, pane dzimwe nguva iyo mari yekutsinhana inogona kukuvadza zvaunofarira. Kusvikira pakudzikamisa iyo purofiti iwe yaunogona kuwana kubva panguva yaunoshandirwa. Kuti udzivise iyi isingafadzi mamiriro, hapana chinhu chiri nani pane kuhaya homwe yekudyara iyo yakagadzirirwa nekuchengetedza mari. Nenzira iyi, hauzokuvadzwa neshanduko isingafadzi mumari yechibvumirano. Ingave iyo euro, dhora, paundi sterling kana chero imwe.
Nenzira iyi, mune dzimwe nguva kurasikirwa kwacho hakuzove kwakasimba zvakanyanya kana zviitiko zvacho zvisingaite. Paunenge uri mune vamwe, zvinongokubatsira iwe kunatsiridza chirevo chemari ine purofiti yakakwira kwazvo. Chero zvazvingaitika, ichave iri nzira yekudyara isingazokuvadza zvaunofarira. Kana zvisiri, nekusiyana, ichave iri nzira inobatsira kwazvo yekudzivirira zviitiko zvisingafadzi zvemisika yemari. Pasina kumbobhadhara mamwe makomisheni. Mune izvo zvichave imwe sarudzo kune manejimendi yako wega kana emhuri zvinhu.
Kushanda manejimendi yemari
Imwe yemafomati iwe aunogona kusarudza mukirasi ino yezvigadzirwa zvemari ndeye manejimendi yemari yekudyara yakawanda yakachinjika. Hazvishamise kuti iwe uchawana kuti iwe unokwanisa kuchinjika kune ese angangoitika mamiriro mumisika yemari. Kunyangwe mune inonyanya kukuvadza pane zvaunofarira. Unogona kuenda kubva pamari inoshanduka kuenda kune yakamisirwa mari kana zvinopesana, zvinoenderana nekushanduka kwezvinhu zvakasiyana zvemari. Uye zvakanyanya kukosha, pasina iwe unofanirwa kuita zvachose chinhu. Panzvimbo iyoyo, zano iri richava rinotarisira maneja weinvestment fund pachayo.
Kubva pane iyi nzira yakajairika, inogona kuve nzira inobatsira kwazvo kuchinjika neshanduko nyowani mumatambudziko ehupfumi. Kana zvirinani kana paine chakakosha kusiana kwemaitiro yemisika yemari. Kufanana nemuenzaniso, kubva pakusimudzira kusvika kune yakadzika. Zvekuti nenzira iyi iwe uri mune yakanakisa mamiriro ekuita kuti yako kuchengetedza ibatsire. Chero chero chimiro icho iwe chaunopa seadiki nepakati investor. Parizvino, chikamu chakanaka chemari yekudyara chinogadzirwa pasi pehunhu hwakakosha. Iwe hauzove nematambudziko kuzviwana mune icho kupihwa kwakapihwa nebhangi rako.
Models ine kusiana kukuru
Iyi ndiyo imwe yemaitiro anogona kukubatsira pane imwe nguva muhupenyu hwako hwemari. Kunyanya sezvo iwe uchigona kusanganisa akasiyana mari yemari kuyedza kugadzira kunatsiridza mashandiro yezvigadzirwa zvemari izvi. Kubudikidza nenzira iyi yekudyara zvichave nyore kwazvo kugadzirisa maratidziro epakati. Uye pane zvirinani, kudzikisa kurasikirwa kana zviitiko mumisika yezvemari zvisiri izvo zvakatanga kukurudzirwa. Uye zvakare, kunyorera kwayo hakudi kuti iwe chero nguva ubhadhare chero mhando yemakomisheni kana mari yeayo manejimendi kana kugadzirisa. Kusvika padanho rekuti mari yekudyara iyi inogona kubatsira zvakanyanya pane imwe nguva muhupenyu hwako hwemari.
Kune rimwe divi, kusiyanisa mune mutual mari kunogona kushanda kuchengetedza mari kubva zviitiko zvakanyanya kushata mumisika yemari. Kusvika padanho rekuti rinogona kukuita iwe kuti uwane mari kana mune mamwe mamiriro ichi chokwadi chiri chinopfuura zvisingaite. Kuburikidza nemubatanidzwa chaiwo wezvinhu zvemari. Kwete chete kubva kuequity, asiwo kubva kune yakamisirwa mari kana kunyangwe kubva kune imwe nzira kana dzimwe nzira dzekuvandudza. Ichi ndicho chimwe chezvakanakira kuti kusarudza iyi modhi kunopa mukudyara kwakachinjika mukutungamira kwayo.
Vhura kune zvitsva zvataurwa
Imwe kiyi yekuzadzisa zvinangwa zvako ndeyekuti homwe yekudyara inogona kusanganisira mamwe emhando dzakatsiga dzekudyara. Nechinangwa chikuru chekudzora njodzi dzechikamu chine hukasha hwechigadzirwa chakanyorerwa. Semuenzaniso, kuburikidza neimwe mari yemari ye hunhu hwemari iyo inopa chengetedzo huru mumari yakaiswa. Ehe, purofiti yayo haizove inoshamisira zvachose. Asi pane zvinopesana, chichava chivimbiso chekuchengetedza zvaunofarira panguva yakakodzera kwazvo. Pamusoro pemamwe mafomati ane hukasha mukirasi ino yezvigadzirwa zvemari.
Kana ichi chiri chishuwo chako, haufanire kunetseka zvakanyanya kubvira iyo chipiro chinopihwa nemakambani manejimendi Iyo yakakura kwazvo uye inoitirwa marudzi ese emashandisirwo emushandisi. Pasi pezana muzana zvinoenderana nekuti muenzaniso wako ndeupi mudiki uye wepakati investor. Uye zvakare, mari idzi dziri nyore kwazvo kunzwisisa nekuti kuumbwa kwavo hakuna kuomarara. Unogona kuvawana vari vaviri mumafomati akabatanidzwa kune equities uye mari yakatarwa. Iyi ndiyo nzira yekudzivirira inogona kukuendesa kunze kwedambudziko rimwe chete mune zvisingaite mamiriro ehupfumi. Izvo zvinodikanwa kuomesa hupenyu hwako nekunyorera kune akasiyana marudzi ezvigadzirwa zvemari.
Iyo yakachengeteka: mari
Muzviitiko zvakaomesesa iwe unogona kana kuhaya izvo zvinonzi mari yekudyara mari. Ivo vanoshanda sebhiriji usati waenda kune mamwe maitiro akaomarara. Ichokwadi kuti mashandiro auchazowana navo anenge ari mashoma. Asi zvirinani iwe unomisa kurasikirwa mune yako yekudyara portfolio. Kusvika padanho rekuti iwe uchave uine nguva yekuchinjisa kune mamwe anodikanwa emhando. Iyo kudzoka iyo mari yemari yekudyara inounza iwe oscillate anenge pakati pe0,10% ne1,50%. Iko kunenge kuchikosha kwazvo kuti iwe sarudza chaiyo mari kuti udzivise zvikanganiso zvaunogona kubhadhara zvakanyanya chero nguva panguva yekudyara maitiro.
Pane zvinopesana, ivo vanozove nenjodzi yakaderera mukuhaya kwavo nekuti havawanzo kupa kurasikirwa kwekukosha kwakakosha. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti idzi mari dzekudyara dzinogona kukushandira iwe se utiziro pamberi penguva dzakaomesesa mumisika yemari. Kunyanya kana iko kusarudzika kuri kuitika mumisika yemari kuri pachena bearish. Ehezve, iwe unenge uine dambudziko diki kwazvo neizvi zvigadzirwa zvemari kubva zvino zvichienda mberi. Ndiwo mukana wakakura wegadziriro yaro uye zvakasiyana nedzimwe mari dzinonetsa kwazvo.
Fukidza kusagadzikana kwezviitiko
Chekupedzisira, iyi fomati inogona zvakare kukununura kubva kune anopfuura rimwe dambudziko kubva zvino zvichienda mberi. Kunyangwe zveizvi iwe uchafanirwa kutora njodzi zhinji kupfuura dzimwe. Saka iyo purofiti yakaiswa mune yako mari chirevo munguva dzakaipisisa dzemisika yemari. Nekudaro, iri yemhando yekudyara iyo inokurudzirwa chete kuitisa kune yakatarwa nguva ye nguva pfupi. Ndipo pavanonyanya kushanda mukuvandudza kudzoka kuhupfumi hwako kana hwemhuri.
Chekupedzisira, semubatsiri kune iyo investa, unogona kuvasanganisa nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya kana kunyangwe neyakajairika dhipoziti iyo inopa kudzoka kunogamuchirwa kune zvaunofarira. Semuenzaniso, kusimudzira iyo inogadzira kudzoka padyo ne 1,50%. Kunyangwe muzviitiko zvakawanda ivo vachizoda imwe mhando yekubatana: yakanangana nemubhadharo, zvemhuri zvikwereti kana kuwedzera hukama hwako nebhangi. Inogona kuve musanganiswa unounza iwe zvakawanda zvakanaka kupfuura zvinokanganisa. Uye nekudaro iwe unofanirwa kuzvifunga kuti uchengetedze mari yako kubva zvino zvichienda mberi. Kunyangwe iri kubva kune yakadzivirirwa mamiriro kupfuura mune mamwe emhando dzekudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Makiyi mashanu ekudzivirira mari yako yekudyara
Iwe unogona sei kuchinjisa pane kugadzirisa?